Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-FAA iyalutyeshela igunya lesihlalo seCongress kunyaka wesithathu
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Abakhweli badala kwaye bakhulu, izihlalo ziyaqhubeka nokuncipha, iinqwelomoya zigcwele, iibhegi ezithwalwayo ziziswa kwiinqwelomoya, kwaye i-FAA iyaqhubeka nokuvumela abavelisi beenqwelomoya ukuba baxhomekeke kwidatha yakudala, iingcinga, kunye nokulinganisa endaweni yedatha entsha okanye ukuqhuba iimvavanyo ezintsha.
I-FAA ibamba iimpumlo zayo kwiCongress kunye nabakhweli suku ngalunye iyala ukuthatha amanyathelo kule micimbi mibini yezokhuseleko.
IFlyersRights.org icwangcisa ukungenisa uxwebhu lwezikhalazo elitsha ukuba i-FAA iyala ukwenza into kungekudala.
Ukuphuma okungxamisekileyo okungama-43 okwakonganyelwe yi-FAA, inye kuphela eyayiqhutywa kwisitulo se-intshi ezingama-28.
FAA inyathelo kwimigangatho yokuhlala kunye nokufuduswa okungxamisekileyo kwaba yiminyaka emibini kulindeleke ukuba kubanjwe uLwesibini, u-Okthobha u-5, 2021, kwaye i-FAA ayibonisanga bungqina bokwenza inkqubela kuwo nawuphi na umcimbi.
ICongress iphumelele FAA Umthetho woGunyaziso kwakhona nge-5 ka-Okthobha ka-2018. Umthetho wawufuna ukuba i-FAA isete imigangatho yokuhlala isihlalo kwaye ivavanye imigangatho yayo yokufuduka ngexesha likaxakeka nge-5 ka-Okthobha ka-2019. ingxelo kwiCongress okanye kuluntu. Ingxelo iqulethe iingcebiso ezingama-2020 zokuhlaziya kunye nokuphucula inkqubo yesiqinisekiso sokufuduka.
"Le FAA icaphuna iimpumlo zayo kwiCongress nakubakhweli suku ngalunye iyala ukuthatha amanyathelo kule micimbi mibini ibalulekileyo yokhuseleko kwezokubhabha, ”ucacisile uPaul Hudson, uMongameli IFlyersRights.org. “I-FAA ifuna ukufikelela kumaxesha. Abakhweli badala kwaye bakhulu, izihlalo ziyaqhubeka nokuncipha, iinqwelomoya zigcwele, iibhegi ezithwalwayo ziziswa kwiinqwelomoya, kwaye i-FAA iyaqhubeka nokuvumela abavelisi beenqwelomoya ukuba baxhomekeke kwidatha yakudala, iingcinga, kunye nokulinganisa endaweni yedatha entsha okanye ukuqhuba iimvavanyo ezintsha. ”
IFlyersRights.org uceba ukungenisa isikhalazo esitsha sokwenza umthetho ukuba i-FAA iyala ukwenza into kungekudala. Isikhalazo salo somthetho sango-2015, esibizwa ngokuba "Ityala leSihlalo senqwelo moya esimangalisayo" yiNkundla yeSibheno seDC seSekethe, sanceda sakhanyisa ukungasebenzi kwe-FAA kunye nemigangatho ephelelwe lixesha.
NgoSeptemba 2020, i-Ofisi yeSebe lezoThutho loMhloli-Jikelele (i-OIG) yakhupha ingxelo echaza iziphene ezininzi kwi-FAA yokukhutshwa kwimeko yesiqhelo kunye nokuvavanywa kwenkqubo. Ngokukodwa, i-OIG ityhile ukuba FAA Ulahlekise iFlyersRights.org kwi-2018 xa, ngokwala ukwenza umthetho okwesibini, i-FAA ibibek 'esweni imiboniso emininzi yokukhutshwa kwindawo yokuhlala eyi-intshi ezingama-28. I-FAA ibandakanye iividiyo ezintathu kwaye yabhengeza ukuba ziqhutywa ngee-intshi ezingama-28. Kodwa enyanisweni, ukuphuma kwabantu abangama-43 ngexesha likaxakeka elibekwe esweni yi-FAA, inye kuphela eyayiqhutywa nge-28 ye-intshi yokuhlala. Eminye imiboniso ibiphakame kangangeesentimitha ezingama-38, ngelixa i-13 kwimiboniso engama-43 ingakhange ibhekise nakweyiphi na indawo yokuhlala, ububanzi, okanye ubungakanani konke konke.